Orinasa fanaovana kilalao vaovao - Mpanamboatra sy mpamatsy kilalao vaovao any Sina
Ny tontolon'ny kilalao dia mahaliana, tsy ho an'ny ankizy ihany fa ho an'ny olon-dehibe tia miala sasatra amin'ny tontolo tena izy. Izahay dia ekipan'ny matihanina mamorona sy miavaka izay hamorona kilalao vaovao manintona sy kilasy voalohany isan-taona. Anisan'izany ny kofehy fametahana plastika / vy, vatomamy fidget plastika, peratra fidget magnetika hampihenana ny adin-tsaina sy ny tebiteby any am-piasana, ary koa ny sakana amin'ny fampitomboana ny fahaiza-mamorona amin'ny ankizy. Miaraka amin'ny fitaovana avo lenta sy voamarina, azo antoka, mateza ary maharitra. Mifanaraka amin'ny fenitra kilalao henjana, toy ny EN71, USA ASTM F963, Taiwan ST ary Japan ST, ary mifanaraka amin'ny fetra CPSIA ho an'ny firaka sy phthalates. Zavatra samy hafa mifanaraka amin'ny takiana isan-karazany. Izay liana, azafady mifandraisa aminay. Mitantana izahay mba hiara-mitondra ny tsara indrindra, ny fianarana ary ny teknolojia miaraka mba hamoahana vokatra mahatalanjona.
Keychain fampiroboroboana fampiroboroboana manokana
Kilalao milomotra malefaka PU Foam
Spinner Plastika Fidget
Rindrambaiko mieritreritra ny rantsantanana